गोर्खा जातिको विकास, हायेस्ट फर्म अफ् रिजननल अटोनोमी हुनुपर्छ – जिवेश सरकार
Sunday , December 16 , 2018 11:21PM
माकपाको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै पूर्व राज्यसभा सासंद समन पाठक
कालेबुङ 8 जनवरी-गोर्खा जातिको विकास, हायेस्ट फर्म अफ् रिजननल अटोनोमी हुनुपर्छ’ माकपा जिल्ला सचिव जिवेश सरकारले भने, ‘जुन स्वशासनको प्रावधान संविधानमा पनि छ। माकपाले भनेको स्वशासन कुन व्यवस्था हो भन्ने स्पष्ट नबताए पनि पहाडबासीको निम्ति संविधान अन्तर्गत एउटा उच्चस्तरीय स्वशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ भनि बताए। जगन्नाथ धर्मशालामा आयोजित गरिएकोमा माकपाका जिल्ला सम्मेलनमा उपस्थिति हुने आएको जिवेश सरकारले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोर्खाहरूलाई स्वशासनसितै भारतभरिका गोर्खाहरूको परिचयको निम्ति भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ। पहाडको अरू विकासको निम्ति राज्य र केन्द्रले ध्यान दिनुपर्छ भन्दै उनले पहाडको वर्तमान स्थितिको जिम्मेवार तृणमूल कङ्ग्रेस हो भनि आरोप लगाए।
आज पहाडको स्थिति जटिल भएर हुदैछ, पहाडको स्थिति बिगार्नु पनि जीटीएको पनि कमजोरी हो। उनले पहाडको वर्तमान परिस्थितिलाई केन्द्र गर्दै चाँडो त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पहाडको स्थितिलाई सुधार ल्याउने चाँडोभन्दा चाँडो पहाडका प्रतिनिधिहरू र राज्य सरकारलाई लिएर त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु पर्छ भनि बताए। जिवेश सरकारले तृणमूल कङ्गेसतै भाजपाको पनि जिम्मेवार रहेको बताए। भाजपाले चुनाउ आउँदा मात्र गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भन्छ, जब चुनाउ सकिन्छ, सासंद बनिन्छ तब सासंद समेत पहाडमा हुँदैन, अहलुवालिया अहिले कहाँ छ?, उनले प्रश्न गरे भाजपाले गोर्खाहरूसित विश्वासघात गर्दैछ।
माकपाले रातो झण्डा लिएर मजदुर-किसानको एकता र गोर्खा जातिको विकासको निम्ति स्वशासनको कुरा गर्दै पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन सम्मेलन गरिरहेको बताए। राज्यको सन्दर्भमा प्रश्न राख्दा उनेले भने के अलग राज्य भए गोर्खा जातिको समस्या समाधान हुन्छ? गोर्खा किसानको, गोर्खा मजदुरको समस्या समाधान हुन्छ? अलग राज्यको माग छ, ठिक छ। तर यसबारे आलोचना हुनुपर्छ, त्रिपक्षीय वार्ता गरेर ठोस् निर्णय हुनु भनि बताए। कालेबुङ जिल्ला एरिया समिति गठन गरियो यसमा 20 जना रहेको उक्त कमिटीका सचिवका रूपमा तारा सुन्दासलाई चयन गरिएको छ। सुन्दासले हैदरावादमा आगामी अप्रेल महिनामा हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन भाग लिने बताए। यो सम्मेलनमा पूर्व राज्यसभा सासंद समन पाठक, दिलिप सिंह,नरुल इस्लाम, परिमल भौमिक आदि विशेष रूपमा उपस्थित रहेको थियो।
गोर्खाहरूले एकताको मूल्यलाई बुझ्न सकुन्, नवभवानी माँ प्रति प्रार्थना गर्छु – विमल गुरूङ
Visits : 151398